Amanzi aphuma kwi-Transhepatic Biliary Drainage
Yintoni ekufuneka ndiyazi malunga ne-percutaneous transhepatic biliary drainage (PTBD)?
I-PTBD yinkqubo yokuvula i-bile duct evaliweyo.
Ndiyilungiselela njani i-PTBD?
Umboneleli wakho wezempilo uya kukuxelela indlela yokulungiselela inkqubo. Unokukuxelela ukuba ungatyi okanye usele nantoni na emva kobusuku ngaphambi kwenkqubo. Yenza amalungiselelo okuba kubekho umntu okuqhubela ekhaya ukusuka kwinkqubo.
Kuya kufuneka ulandele ukutya okuthile ngaphambi kwenkqubo yakho. Kuya kufuneka ubone ugqirha otya ukutya okuya kukufundisa ukuba yeyiphi ukutya oza kuyitya kwaye yeyiphi into ekufuneka uyiphephe. Ukuba usela utywala, kungafuneka uyeke.
Xelela umboneleli wakho ngawo onke amayeza owasebenzisayo ngoku. Uya kukuxelela ukuba kufuneka uyeke naliphi na iyeza kule nkqubo, kwaye uyeke nini. Uya kukuxelela ukuba ngawaphi amayeza oza kuwathatha okanye ungawasebenzisi ngomhla wenkqubo.
Kuya kufuneka ukuba kuvavanywe igazi kunye ne-EKG. Unokufuna i-x-ray, i-ultrasound, i-CT scan, okanye i-MRI.
Unokunikwa i-antibiotics ukukunceda ukukhusela intsholongwane. Tshela umniki-nkonzo wakho ukuba unobungozi kwi-antibiotic.
Unokuba ne-endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) ngaphambi kwenkqubo yakho. I-ERCP inokunceda umboneleli wakho acwangcise inkqubo yakho. Unakho nokususa amatye okanye ukukhula kwinqanaba lakho le-bile.
Kuza kwenzeka ntoni ngexesha le-PTBD?
Unokunikwa i-anesthesia ngokubanzi ukugcina ulele kwaye ukhululekile kwiintlungu ngexesha lenkqubo. Endaweni yoko unokunikwa i-anesthesia yendawo okanye yomqolo ukuze ubambe indawo. Ukuskena i-CT okanye i-fluoroscopy inokusetyenziswa ngexesha lenkqubo. Umboneleli wakho wezempilo uya kubeka inaliti kwicala lasekunene lesisu sakho nakwisibindi sakho. Ucingo luya kutyhalwa ngenaliti nakwisibindi sakho.
Umboneleli wakho uya kusebenzisa ucingo ukuqhekeza amatye athintela i-bile duct yakho. Uya kubeka ityhubhu ngaphezulu kwenaliti emva koko asuse inaliti kunye nocingo. Umbhobho uya kushiywa endaweni. Icandelo elincinci lombhobho liza kuza ngesikhumba sakho ngaphandle komzimba wakho. Ukuba ityhubhu ibanjiwe, inyongo iya kungena emathunjini akho. Ukuba ityhubhu ishiywe ivulekile, inyongo iya kuthi gxu kwingxowa encanyathiselwe esiphelweni setyhubhu engaphandle komzimba wakho.
Yintoni endimele ndiyilindele emva kwe-PTBD?
Uya kusiwa kwigumbi lokuphumla ude uvuke ngokupheleleyo. Uya kujongwa ngeliso elibukhali kuzo naziphi na iingxaki. Yenza hayi phuma ebhedini de umboneleli wakho wezempilo athi kulungile.
Uya kuncediswa kukuhambahamba emva kotyando. Ukuhamba kunceda ukuthintela amahlwili egazi.
Iyeza inokunikwa ukuthintela okanye ukunyanga iintlungu okanye isicaphucaphu.
Buphi ubungozi be-PTBD?
I-gallbladder yakho, i-bile duct, okanye imithambo yegazi ingonakaliswa. Usopha ngaphezu kokuba bekulindelekile. Emva kwenkqubo, unokuba nokudumba okanye ukopha ujikeleze ityhubhu. Ulusu olujikeleze ityhubhu lunokosuleleka. Umbhobho unokuhamba endaweni okanye uvaleke. I-gallbladder yakho inokudumba okanye yosuleleke. Unokuphuhlisa i-clot yegazi kwisibindi sakho okanye isifo somphunga. Imiphunga yakho ingagcwalisa igazi okanye umoya, yenza kubenzima kuwe ukuphefumla.
Umahluko phakathi koxinzelelo kunye noxinzelelo
I-deramaxx 75 mg yezinja
iziphumo ebezingalindelekanga ze-sertraline hcl 50mg
Iipilisi ze-norgestimate kunye ne-ethinyl estradiol
ipilisi ene-np 14
iintlungu emazantsi ebambo
Ubisi lwethamo le-magnesia